musha Europe Akasanganiswa Maartist Alistair Overeem Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Yedu Alistair Overeem Biography inoratidza Chokwadi chake chehucheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Mudzimai, Vana, Mararamiro, Net Kukosha uye Hupenyu Hwega.
Zvichitaurwa zviri nyore, iko kuongororwa kwakazara kwerwendo rwehupenyu hweakicker wetsiva, kubva pamazuva ake ehudiki kusvika paakatanga kuve nemukurumbira.
Kuti uratidze hunyanzvi hwehupenyu hwako, heano mubhedha wake kune vakuru gallery - chidimbu chakakwana cheOvereem's Bio.
Hupenyu hwepakutanga uye Biography yeAlistair Overeem.
Hongu, munhu wose anoziva kuti ndiye mumwe wevarwi vaviri vakabata mazita epasi rose muK-1 kickboxing uye MMA panguva imwe chete.
Nekudaro, vashoma chete vateveri vanoziva nezveAlistair Overeem's Biography, iyo inonakidza kwazvo. Pasina imwezve ado, ngatitangei.
Alistair Overeem Yehucheche Nyaya:
Kune ekutanga maBiography, ane zita rekuti "Munhu Wekuputsa". Alistair Cees Overeem akaberekwa musi we 17th waMay 1980 kuna amai vake, Clair, uye baba veJamaican muHounslow, England.
UFC Fighter ndiye gotwe pavana vaviri vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake, vanoratidzwa pano.
Nenguva iyo Overeem yakavhara 6, baba vake naamai vakarambana. Dambudziko rose rakachinja mukomana wechidiki aifara kuita mwana akasuruvara.
Zvisinei, kuvapo kwaValentijn (mukoma wake) kwakaita kuti huduku hwake huve husina kusurukirwa.
Alistair Overeem Ekukura Mazuva:
Kubva pane iyo-set, mudiki wechiDutch aive nekakutya maari maererano nekutarisana nevezera rake. Aigara achitsvaga nyaradzo nemukoma wake, uyo aimudzivirira kubva kune vanodheerera.
Kuona kuti Overeem angatarisana nedzimwe njodzi dziri kuuya iye asipo, Valentijn akatora jasi rekumudzidzisa hunyanzvi hwekurwa.
Kukura nemukoma wake kwakaita kuti hupenyu hwake huve hwakawanda kugadzikana.
Kunyangwe asina kutanga kufarira zvemitambo, Alistair akapa nguva yake yekudzidza kubva kuna mukoma wake mukuru. Ehezve, akakurumidza kuzviona achimira achipesana nevamwe vaigara vachishusha avo vakarega kukanganisa zvinhu zvake.
Mhuri yekwaAlistair Overeem:
Kare kare, sekuru-sekuru vake vaive muranda pachitsuwa cheJamaica. Nekutenda, akahwina rusununguko rwake ndokutanga kutora nzvimbo yakakura. Ikoko, akatanga musha uyo uchiri kubudirira kusvika zvino.
Overeem anewo chizvarwa cheDutch nekuti amai vake vazukuru vaMambo William III weNetherlands.
Pasinei nemhuri yababa vake, Reem haana kumbodzokera mukutsvaka kwake kubudirira. Sezvo ini ndichinyora iyi Bio, akazvimisikidza iye sechiratidzo icho avo vakamutangira vanogona kudada nacho.
Haangambokanganwa kutanga kwake kuzvininipisa kubva kunamai vake.
Alistair Overeem Yemhuri Yemashure:
Zvinosuruvarisa, imba yake yakashatiswa nehukasha hwekurambana paakanga aine makore 6. Achitevera kupatsanurwa kwevabereki vake, amai vaOvereem vakamutora pamwe nemukoma wake kutanga hupenyu hutsva muHolland.
Kare ikako, Clair Overeem akatora mabasa akati wandei mune mamwe kuti awane chouviri kuvana vake.
Pakanga pari panguva iyoyo yehupenyu hwake apo mhuri yake yakanetseka mune zvemari. Nekudaro, mukoma waOvereem akanyoresa kuMartial art academy kwaakarwira kuti awane mari yeimba yake.
Maitiro Alistair Overeem Ekurwisa Basa Rakavamba:
Achiona kuti Valentijn (munin'ina wake) akawana mari kubva kuzviitiko zvine chekuita nemitambo, anouya kick-boxer akatora mukana mukuyedza mitambo yakasiyana. Kutanga, akakwikwidza muJudo. Mushure mezvo, akatora chikamu mu basketball pamwe nekutamba uye zviitiko zvemumunda.
Panguva iyo Overeem paakavharira gumi nemashanu, anga atoita pfungwa dzekutsvaga basa mukurwisa hunyanzvi. Nekudaro, akanyoresa kune imwechete yakavhenganiswa yemasoja kosi uko munin'ina wake akatangawo.
Alistair Overeem Hupenyu hwepakutanga muUFC:
Pakutanga, haana kutora kudzidziswa kwake zvakanyanya. Nekudaro, akave akazvipira zvakanyanya munzira yekurwa mushure mekunge asangana naJoop Kasteel naBas Rutten.
Ndiine mukoma wake achitarisa kuvandudzwa kwake, Overeem akaita kutanga kwake muMMA pazuva re24th yaGumiguru 1999.
Akanga ane makore 19 paakakunda Ricardo Fyeet nekutumira mumutambo wake wekutanga weunyanzvi - chiitiko chakaita kuti amai vake vadade.
Mushure mezvo, Overeem akakunda kumwe kurwa kuviri asati apinda muPride Middleweight Grand Prix muna 2003. Zvinosuruvarisa kuti UFC Light heavyweight Champion, Chuck Liddell, akamubvisa mumaquarterfinal.
Alistair Overeem's Bio - Mugwagwa kune Mukurumbira Nhau:
Muna 2007, Overeem akakunda Paul Buentello ndokuve Strikeforce Heavyweight Champion. Kufanana Nate Diaz, mazuva ake ebasa mumakore akatevera aive musanganiswa wekukunda uye kurasikirwa.
Aratidza kukosha kwake munyika yehondo, Alistair ane makore makumi matatu nerimwe akasaina kondirakiti neUFC muna 31.
Nesimba rake risina munhu. akaita zvakawanda zvinokuvadza uye akakunda achipesana naBrock Lesnar sezvaanotanga muUFC gore rimwe chete.
Alistair Overeem's Biography - Kumuka kune Mukurumbira Nhau:
Kukunda yaimbova UFC Heavyweight Champion (Brock Lesnar) mumutambo wake wekutanga akamugadza sezita rekuverengera muMMA.
Nekudaro, mwanakomana asina kusimba waClair anoonekwa semumwe weakanyanya kutenderedzwa anorema mumutambo kubva muna 2021.
Moreso, simba rake uye hunyanzvi, izvo zvakamupa zita remadunhurirwa rekuti "Munhu Wekuputsa" zvakamutungamira mukuhwina mibairo mizhinji.
Ehe, akahwina makwikwi mazhinji kuzita rake.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora iyi Bio, Alistair Overeem anogona kutora uta kubva muUFC muna2021.
Kutenda kutsunga kwake uye kushinga, iye akakurumbira kickboxer anobva kuNetherlands akazvisimbisa sezita remhuri muMMA kwemakumi emakore. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Nezve Zelina Bexander - Mukadzi waAlistair Overeem:
Sezvineiwo, murume wekuparadza anga ari muhukama hwakati wandei, zvirinani zviviri zvatinoziva nezvazvo. Haasi iye Casanova mhando, sezvo anoshandisa yakawanda yenguva yake kudzidzira uye kugadzirira kurwa.
Panguva yekunyora iyi Bio, Alistair akavimbiswa nemusikana wake wenguva refu. Anonzi Zelina Bexander, uye anoshanda sehofisi maneja.
Ehe, ndiye runako rusingawanzo akakunda kuvimba naamai vake nehanzvadzi yake. Zvishoma zvandinokanganwa, shiri dzerudo dzakapfimbana muna 2011.
Anogara achidada nekuratidzira musikana wake.
Alistair Overeem Vana:
Kubva paukama hwake hwepakutanga, murwi ane tarenda aive nemwanasikana ainzi Storm. Akazvarwa musi we 17 Gumiguru 2006.
Ukama hwake hwakazotevera hwakakonzera kuberekwa kwevanasikana vake vaviri; Yazz-ley Rey uye Sensi-Liss Royce. Ivo vakaberekwa muna 2016 uye 2017, zvichiteerana.
Alistair Overeem Hupenyu Hwemhuri:
Nehudiki hwake kushaya rudo rwababa, aive asina imwe nzira kunze kwekutendeukira kuna amai vake nemukoma wake kuti vanyaradzwe.
Ndivo vaiva tsigiro yaasina kumbobhadhara. Nekudaro, tinokupa iwe neruzivo rwakapfupi nezve nhengo yega yega yeOreem's Mhuri.
Nezve amai vaAlistair Overeem:
Kutanga, zita raamai vake ndiClair Overeem, mukadzi wechiDutch anova wedzinza raMambo William III weNetherlands.
Iye muridzi wemba ane dzidzo shomashoma. Nekudaro, Clair akapa chibayiro chake kunyaradza kurera vanakomana vake vaviri. Mushure mekurambana nemurume wake, amai vaAlistair vakashanda mabasa akati wandei kuti vape zvinodiwa nevana vavo.
Sangana naamai vaAlistair, Clair Overeem.
Nezve Baba vaAlistair Overeem:
Kunyangwe aine ruzivo rwakashata rwehudiki nekuda kwekushaikwa kwababa vake, Overeem achiri kupa nguva yekushanyira murume wake mukuru.
Sezvatakambotaura, baba vake ndewekuzvarwa muJamaica. Chokwadi, baba vaOvereem vanodada nekubudirira kwevanakomana vavo. Sezvo zva2021, baba-mwanakomana wavo bond inoramba isina kubvaruka.
Baba vake vane hupenyu sezvavari. Tarisa uone baba-mwanakomana wavo kusangana.
Nezve Alistair Overeem's siblings:
Alistair ane hama yakura inonzi Valentijn Overeem. Iye ari pamudyandigere wechiDutch muvhenganiswa akasanganiswa nemasoja uye kickboxer senge munun'una wake.
Yaiva Valentijn iyo yakadzivirira uye yakapa Overeem kurudziro yekutsvagisa MMA apo iye aive arasikirwa neshungu dzake dzekurarama.
Valentijn Overeem anogara ari mudzidzisi wake wekutanga uye mudziviriri wehucheche.
About Alistair Overeem's Hama:
Kana kuda kwekusimudza shasha yeMMA uye munin'ina wake kwakaomera amai vake, vaive gogo vake vakapindira kuti vamubatsire.
Kunyangwe nanhasi, Overeem anowanzo kupedzera nguva naambuya vake, avo vanofarira kutora mifananidzo naye. Panguva yekunyora iyi Bio, hapana kana ruzivo pamusoro pasekuru vake, vana sekuru namainini.
Sangana naambuya vaOvereem. Anoda kuoneka mumifananidzo yake.
Alistair Overeem Hupenyu hweMunhu:
Zvichida hupenyu hwake hwepakutanga mumatumba ndechimwe chezvikonzero zvikuru zvaakaratidzira hunhu hwakaderera.
Ehe! Overeem ari pasi pasi uye anotora zvaakawana seropafadzo. Sezviri pachena, hunhu hwake husingasarudze ndosaka aida kurwisa Jon Jones asati adaidza kuti kurega kubva kuUFC. Mumashoko ake, Overeem akataura kuti achanzwa kukudzwa kukwikwidza naJones.
Kutamba mitambo yemavhidhiyo ndeimwe yemabasa ake ekuzvivaraidza. Sezvo ini ndichinyora iyi Bio, murume weDololition atora kune ake enhau midhiya kuratidza vateveri vake achangowana Xbox mutambo. Pamwe akagona pakutamba mitambo sezvaari munharaunda yehondo yehondo.
Kuda kwake mitambo hakufungidzike.
Alistair Overeem's Lifestyle:
Basa rekuchinja hupenyu reRemu rakamuwanisa mari inofungidzirwa yeNet Worth ye $ 15million (2021 Stats). Sezvinoshamisa sezvazvinogona kuratidzika, kunyangwe mhuri yake ingadai isina kufanofungidzira kuti mukomana mudiki aizokura achirarama hupenyu hwoumbozha.
se Kaini Velasquez, Overeem atenga mota zhinji dzekunze uye imba yepamusoro. Pane dzinoverengeka, anotora mhuri yake achienda kuDubai nedzimwe nzvimbo dzakanaka kuti vaone nzvimbo dzakadai.
Alistair Overeem Chokwadi:
Kuputira yedu yeupenyu yehondo yehondo yeHupenyu Nyaya, heano mashoma echokwadi angakubatsire iwe kuti unzwisise zvizere nezve rake biography.
Chokwadi # 1: Kukundikana Kwemuedzo Wezvinodhaka:
Zvinosuruvarisa, Overeem akakundikana pre-kurwisa bvunzo yemushonga yakaitwa neNevada State Athletic Commission. Izvi zvakakonzera kudzimiswa kwehondo yake neUFC heavyweight shasha, Junior Dos Santos, mu2012.
Chokwadi # 2: Trivia:
Kubva paakakwira mukurumbira, Overeem ave achibatanidzwa mukukakavara uye kuita zvisirizvo bhatiri. Imwe yeaya mamiriro ezvinhu yaive apo iye nemunin'ina wake pavakarova varatidziri vatanhatu kukirabhu yekutamba yeDutch mu2009.
Chiitiko chacho chose chakaitika, sezvo Alistair akanga asina mari yekubhadhara mukadzi wechimbuzi pachikwata. Panguva iyo mabhauncer akaendeswa kuchipatara kunorapwa, Overeem aifanira kuregedza kurwa kwemusoro nekuda kwekukuvara kweruoko kubva mubopoto.
Alistair Overeem ari pakati pe5% yevanhu vanoita chiIslam muNetherland. Kukurira munyika yekwaamai vake uko maMuslim vashoma hazvina kuodza moyo murwi wehondo kuti asabatirira pakutenda kwake.
Chekupedzisira, Hupenyu Hwehupenyu Nyaya yakaratidza kuti kushanda nesimba uye kuzvipira ndeimwe yeakakosha maitiro atinoda kuti tibudirire. Kunyangwe ari mukomana asina kusimba, akashanda nesimba rakawandisa kuti azviratidze semunhu anoremekedzwa wemauto epasi rose.
Zvinotofanira isu kurumbidza amai vake (Clair) uye mukuru mukoma nekumurera kuva murume akasimba. Nekutenda, aive nevamwe vazhinji vemumhuri vakaita kuti hupenyu hwake hwebasa husanyanya kunetseka. Kuonga kwedu kwechokwadi kunoenda kwavari zvakare.
Ndinokutendai nekuverenga Alistair Overeem's Biography. Ndokumbira ubate isu kana iwe ukawana chero chinhu chisingaite senge chisina kunaka pachinyorwa chedu. Zvakare, tarisa kupfupiso yeHupenyu Hwake Hupenyu patafura pazasi.
Zita rizere: Alistair Cees Overeem
Zita rekudanwa: Munhu Wekuputsa
Nzvimbo yekuzvarirwa: Hounslow, England
Amai: Clair Overeem
Vanun'una: Valentijn Overeem (hama)
Musikana: Zelina Bexander
Vana: Dutu, Yazz-ley Rey naSensi-Liss Royce
Net Worth: $ 15miriyoni
Hobby: Kutamba mitambo yemavhidhiyo